Misoro yeNhau, 03 Chikunguru 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikunguru 03, 2019
Hurumende yoronga kuvandudza mutemo unobata kudzivirirwa kwenyika kuitira kuti ikwanise kubhadhara vaimbove varwiri verusununguko mari dzinoenderana nemari inotambirwa nemusoja ane nyembe dzameja, uye kuti vabhadharirwe mari kana vachinge varwara kana kufa.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chikunguru 02, 2019
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoudza kutambura kuri kuita veruzhinji munzvimbo dzinogara veruzhinji muguta reHarare.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Chikunguru 01, 2019
Hurumende yozadza mapurisa mumigwagwa ichityira kuratidzira kwange kwadaidzirwa nesangano reTajamuka uku gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika richiyambira kuranga vose vanoratidzira.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chikumi 28, 2019
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanosangana nemadzishe ekuMatabeleland neMidlands vachizeya nhunha dzematunhu aya pamwe nenyaya yeGukurahundi mumusangano warambidzwa vatori venhau kunzwa zvanga zvichiitika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikumi 27, 2019
Vagari vekuDomboshawa voita musangano wechimbi chimbi wekuzeya danho rakatorwa nehurumende rekuti kambani yeku China itange mugodhi wematombo izvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vatamiswe kubva munzvimbo dzavanogara.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikumi 26, 2019
Hurumende inoti vanotumira mari dzavo vachishandisa Western Union kana Moneygram havafanirwe kutyira kuti mari idzi dzinotambirwa muZimbabwe dzava ma RTGS sezvo mutemo usina kuchinja izvo zvichita kuti vari munyika varambe vachitambira mari idzi dziri mumari yekunze kwenyika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chikumi 25, 2019
Vamwe vane zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana munyika vanoti vari kuramba kuteerera zvakatarwa nehurumende nezuro zvekuti vatengese zvinhu zvavo vachishandisa mari yemunyika chete, kwete kuti vatengese nemari dzekunze kwenyika.
Misoro yenhau, Muvhuro 24, 2019
Hurumende inoti vanhu vave kungobvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika kwete dhora rekuAmerica, Rand, Pula nedzimwe dzange dzichishandiswa kunyangwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzichiti hapana zvizhinji zvichachinja kumunhuwo zvake.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chikumi 21, 2019
Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chiri kukweshana nechikwata chemaPharoahs chekuEgypt nhasi manheru munhandare yeCairo Internatioanal Stadium mumutambo uchavhura makundano eAfrica eAfrica Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuEgypt.
Chikumi 20, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikumi 20, 2019
Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mamiriyoni akawanda zviri muhupoteri kune dzimwe nyika.
Misoro yenhau yanhasi, Chitatu, Chikumi 19, 2019
Chingwa icho chiri kushaikwa chowedzerwa mutengo kunyangwe hazvo Grain Millers Association iri kuti yapihwa mari yekutenga gorosi nebhanga reRBZ.
Misoro Yenhau, Chipiri, Chikumu 18, 2019
Dare reInternational Criminal Court rinotenda kuti pane vanhu vakaripira nyaya yekuti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vaferefetwe nenyaya yekupfurwa kwakaitwa vanhu nevanofungidzirwa kuti mauto.